Lesona 7: I Jesôsy sy ireo malahelo
Catégorie : Lesona 7: I Jesôsy sy ireo malahelo
Tonga teto an-tany mba haneho antso ho an'Andriamanitra amintsika i Jesôsy. Naneho amin'ny fanoloran-tena an'Andriamanitra tamintsika ny fampianarany, tahaka izany koa ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Nasehony antsika Andriamanitra tamin'ny fomba fiainany; nitondra fiovana teo amin'ny fiainan'ny olona ny zavatra marobe nataony.
Nanoratra mikasika ny fiainan'i Jesôsy sy ny asany ireo mpaminany. I Jesôsy ihany koa aza dia nanambara tamin'ny olony ny amin'ny asa nahatongavany tety (Lio. 4). Niahy ny mahantra Izy, nanampy ireo olona nampahorin'ny mpitondra azy, ary naneho fitiavana tamin'ny olona, tahaka izay nataon'ireo mpaminanin'ny TT.
Tsy tahaka izany anefa no nataon'ireo mpitari-pivavahana tamin'izany andro izany tamin'ireo mahantra ka natahotra an'i Jesosy izy ireo andrao haka ny fahefany Izy. Nosamboriny i Jesôsy, araka izany, ka notsarainy tsy ara-drariny ary nohomboany tamin'ny hazo fijaliana. Maneho amintsika ny faharatsian'ny fahotana ny fahafatesan'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana, kanefa nitsangana tamin'ny maty Izy. Nandresy tamin'ny ady natao tamin'ny fahotana Izy, namonjy antsika ary manome antsika ny fiainana mandrakizay ny nitsanganany tamin'ny maty.